Muslim aan daren laheyn iyo cadow aan wax iska caabin laheyn
Mohamed Ahmed Abdalla (Diyeeshe)
Marka uu maqlo qofka muslimka ah waxa ku saabsan muslimiinta ee ku nool dunidaan daafaheeda ee ah dhibaatoyin iyo dagaalo lagu leedo waxuu daremayaa xanuun ka saameeya xubnaha jirkiisa. waxaa is weydiin mudan warbaahinta reer galbeedka ma waxaa loo sameeyay in lagu waxyeeleyo sumcada islaamka iyo tan musliimiinta? dabcan jawaabtu waxeey noqoneysaa haa warbahinta reer galbeedka waxaa loo unkay in lagu wax yeeleyo sumcada islaamka iyo tan muslimiinta iyaado loogu soo marmarsoonayo argagixisonimo.
Muslimiinta dunida islaamka ku nool waxa ay fahmi kari la'yihiin qorshooyinka cadowgooda iyo dhogorta sahyuniyada. iyaagoo muslimiinta dunida islaamka ay ka dhigteen dhaqamada reer galbeedka qeeb ka mid ah noloshooda. walaalkeey musliimka ahow goormaan xureyn doona falastiin iyo jejniya ? goormansa ogaan laheen in Mareykanka uu yahay cadowgeena koowaad?
Waxaa daah inaga saarneyn in Isra'iil ay heysato wadan sharaftiisa lahaa ayana Isra'iil ku tumata shacabka reer Falastiin maalin kasta hadana ay deris la tahay wax aan ka yareyn 5 dal oo carbeed kuwaas oo dagaalo isra'iil la galay lakiin aan wax naatiija ah ka keenin iyaadoo Isra'iil ay taageero buuxda ka heysata Mareykanka iyo ingariiska iyagoo ilaa hadana la garab taagaan tageeradoodii indho la aanta aheed hadii ay ahaan laheed qaraarada la hor keeno qaramada midoobay. iyadoo dowladda mareykanka ay is hortaagto wax walboo ka dhan ah isra'iil adeegsatana diidmada qayixan ee (VITO) iyadoo sidaasi ay jirto ma lahan wadan ama urur udooda xuuqda islaamka iyo tan muslimiinta hadaba maxaa la gudboon muslimiinta?marka aan ka hadlo fekerkeyga waxaa la gudboon qodobadaan iyo kowo kale oo aad u fara badan
(1) waa in ay mareykanka ka dhigtaan cadow ma'ahan iney talo ka sugaan. (2) waa iney si rasmi ah ugu dhaqmaan sidaa ay ina fareyso sharecada islaamka duniida muslimka. (3) waa iney sameys taan urur wax ka qabta dhibaatoyinka maanta heysta dunida muslimka. (4) waa in ay la hadaan hal cod oo ay ku mideysanyihiin dhamaan muslimiinta dunida ku nool.
Ugu danbeentii waxaan ugu baaqi lahaa dhamaan muslimiinta in ay ka kacaan hurdada oo ay hurdaan waxaana Allah weyn ugu baryayaa in uu quuluubta muslimiinta isku soo duwo guushana uu siiyo muslimiinta meel walbo oo ay aduunka ka joogaan. Amiin
W.D: Mohamed Ahmed Abdalla(diyeeshe) diyeeshe@myself.com
Views expressed in this Article are those of the author and does not necessarily reflect the views of Somali News Network.
Fikrada Qoraalkan waa mid u gaar ah qoraaga ku saxiixan Maqaalkan manaha in aragtidan ay la wadaagto Somali News Network
Gadaal u noqo